Loholona Imbiki Herilaza : “Mila mifanatona ny mpitondra sy ny mpanohitra” | NewsMada
Maromaro ireo naneho hevitra ny amin’ny hirosoana amin’ny ”Ady gasy”. Anisan’ny mirona amin’ny hifampiresahana koa ny filoha lefitry ny Antenimierandoholona, Imbiki Herilaza.
“Anisan’ny adidy amin’ny maha loholon’i Madagasikara, miantso fifankatiavana sy fifampihenoana. Na ny mpitondra na ny mpanohitra na ny eo anelanelany, mila mifanatona sy mifampihaino ary mifanaja mba ho tombontsoan’ny vahoaka malagasy, ary manabe sy mananatra ary manoro ny lalana tokony ho izy ihany koa ho an’ny zanatsika sy ho an’ny vahoaka malagasy mitovy amintsika.”
Io ny fanehoan-kevitry filoha lefitry ny Antenimierandoholona miandraikitra ny faritra avaratra, ny loholona Imbiki Herilaza, manoloana ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Mba ho lalana izorana miaraka ny fampandrosoana ny zava-misy ho an’ny firindran’ny fiarahamonina. Rehefa henoina ny feon’ny fieritreretan’ny rehetra, tsara ny fahasamihafana. Tsy misy zavatra tonga lafatra izany, raha mpitondra ny olona. Mety misy hatrany ny indro kely amin’izany.
Tokony hatao ao anatin’ny filaminana ny fanoherana
“Tokony hatao ao anatin’ny filaminana izany ny fanoherana, tokony hatao ao anatin’ny fitsinjovana ny tombontsoan’ny vahoaka malagasy”, hoy izy. Satria ireo krizy politika sy ireo fifandonana, izay indraindray lasa fifandonana mitam-basy, no hita teto Madagasikara: ny vahoaka malagasy hatrany no voa mafy amin’izay.
Satria mihamihemotra ny firenena amin’izany, miharava ny fihavanana. Matetika, misy lonilony hatrany. Izay ny mahatonga antsika tavela amin’ny fampandrosoana. Betsaka ny firenena niara-niainga amin’i Madagasikara ary vitsy ny firenena manana harena an-kibon’ny tany sy harena an-dranomasina ary vakoka rehetra ananantsika nefa ny toe-tsaintsika matetika no tsy ahazoantsika mandroso.